FAALO: Maxaa sabab u ah Dhibaatooyinka Soomaaliya? W/Q: Cabdullahi dayax | JAALENEWS
FAALO: Maxaa sabab u ah Dhibaatooyinka Soomaaliya? W/Q: Cabdullahi dayax
Published on March 11, 2019 by dayax · No Comments
Faaladdaan oo cinwaan uga dhignay Hal Su’aal oo ah Maxaa Sababo dhibaatooyinka Dalkeena ka jira ayaan waxaan jecel nahay in Umadda Soomaaliyeed aan wax kaga iftiimino inshaa’alah.
Dalka Soomaaliya ayaa ah dal uu Allah SWT uu ku maneystay Kheyraad aad u farabadan waxaana sida cad muuqato in aysan jirin Soomaali ka faa’iideysata hase yeeshee waxaa jira laba dhibaato waa Waaweyn oo ah: Shaqo la’aan ku dhacday Dhalinyaradda iyo Amni darro soo laalaabatay islamarkaasna dadka ku diriday Niya-jab aad u ballaaran.
Arintaani mashquul badan gilisay Kumanaan Soomaaliyeed oo u badan dhalinyaro ayaa waxaa loo aaneenayaa dhamaantood inay masuul ka tahay Dowladda.
HADII AAD EEGNO DHANKA SHAQO LA’AANTA:
Dowlad walba oo timaada waxay xooga saartaa inay shaqo siiso dad gaar ah oo isku dhawyihiin iyadoo taa ay jirto ayaa hadana waxaa aad loo kala saaraa dadka wadanka ku noolaa intii uu burburka jiray iyo dadka Qurbaha ka yimid waxaana muhiimadda la siiyaa Qurba Joogta Taasi oo keentay wadanka inay ka dhacdo shaqo la’aan xoogan oo ay dhalinyaradii ay waayaan Fursado shaqo .
Hadaba Wiilka Qurbaha ka ymid oo shalay markii uu baxaye heystay Lacag uu ku baxo iyo kii lacag la’aan darteed iyo duruuf jirtay wadanka joogay oo wax kusoo bartay hadii muhiimadii la siiyay kii shalay lacagta heystay ma waxaa shaki ku jiraa inay dhaceyso Shaqo la’aan ? Jawaabta ayaa ah inaysan shaki ku jirin taasi , waana sababta ugu weyn ee iminka la joogo wadanka dhalinyaradda ku nool ay shaqo la’aanta u heyso islamarkaana ay u ay u niyad jabsanyihiin.
Amniga ayaa waxaa ka jiro dhibaatooyin farabadan oo soo laablaabtay waxaana aritaani keenay in la waaye fulintii balantii ay galeyn Madaxda dalka.
Hadaba Masuul-walba oo la doorto laga Soo billaabo Gudoomiye Baarlamaan iyo Madaxweyne iyo Xukuumad ilaa qeybaha hoose ee Madaxda ayaa marka loo dhiibayo Xilka waxay ku dhaartaan Kitaabka Qur’aanka Kariimka ah ayagoo ku dhaaranayo in wixii loo idmaday ay fulinayaan waxaana dhacdo inaysan fulinin dhaartii iyo balantii ay galeyn waana Cuquubadda ugu weyn ee Dalkeena maanta heysata.
Marka la doonayo in Amni la sugo waxaa durbo qalbigaaga kusoo dhacayo in lagama maarmaan tahay in Ciidan la helo waxaana Muuqato in Ciidanka Soomaaliyeed ay yihiin 95% kuwa aan qanacsaneen oo niyajab ay ka muuqato, Askariga Soomaaliyeed wuxuu Habeen iyo Maalin taagan yahay Qoraxda , Hadaba Su’aasha isweydiinta mudan waxay tahay Mahelaa Xuquuqdiisa oo dhameystiran? Jawaabta waa Maya waxaana niyajabka kale uu yahay in Ciidan Afrikaan ah mushaar ahaan loosiiyo inkabadan 10-laab inta uu qaato kan Soomaaliga ah.
Ugu danbeyntii Faaladdaan oo kusoo qaatay Laba Qodob ee SHaqo la’aanta iyo Amniga ayaa waxay yihiin labadabo kuwa xiriir leh waxaana shaki ku jirin in hadii ay Dowladaa Xil iska saarto in Dhalinyaradda dalka wax kusoo baratay muhiimadooda la siiyo iyadoo aan looga eexan Qurba Joog wadanka uu noqonayo mid hagaaga sababta aan u leeyahay arintaani ayaa waxay tahay in DHalinyaradda dalkaani ku noolaa mudadii burburka ay ka khibrad badankii kuwa Qurbada joogta maadaama Korkoooda lagu soo dagaalamay oo ay dhadhamiyeen dhibka islamarkaana aysan jecleysaneenin in uu dhibkaasi sii socdo oo amnigana ay ka shaqeenayaa Halka DHalinyaradda Qurbajoogta ah maadaama ay heystaan dhalasho wadan kale ah ay suuragal tahay hadii ay xaaladda xumaato inay wadaka ka dhooofaan .
Abdullahi Hassan Ahmed (dayax)
W/Q: Cabdullaahi Xasan X. Axmed (dayax)